भदौ ८, २०७६ ०१:३७:३५
२५ मिटर प्रकरण : सडक नभत्काएर हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने दाउँमा प्रदेश सरकार ! असार २५, २०७६
हेटौंडा सहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा, कहाँ कहाँ हुन्छ अझै भारी वर्षा ? असार २५, २०७६
अख्तियार हेटौंडाको टोलीद्वारा घुससहित ३ कर्मचारी पक्राउ असार २५, २०७६
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पहिरोले एउटा घर बगायो मकवानपुरमा अविरल वर्षा संगै गएको पहिरोले एक घर बगाएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर २ जितपुर भञ्ज्याङमा ५० बर्षीय सुर्दशन गोलेको घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । असार २५, २०७६
हेटौंडाको राप्ती खोलाले ४ जना बगायो अबिरल बर्षाका कारण हेटौडाको राप्ती खोलामा आएको बाढीले ४ जनालाई बगाएको छ । चार जनालाई खोलाले बगाए पनी एक जनाको उद्धार गरी हेटौडा अस्पताल पठाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिङले जानकारी दिनुभएको छ । अन्य तिन भने आफै निस्किन सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ । असार २५, २०७६
हेटौंडाका मेयरले रोपेको फुल नसर्दै उखेलिने भो ! फुलबारीको लगानी झ्वाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत गत असार १७ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ राप्तिपुल नजिकको खाली जग्गामा माटो सम्याएर, इट्टाको बार बनाएर फुल रोपियो र फुल बारी बनाइयो । हेटौंडाका मेयर मेयर हरि बहादुर महतले खाली जग्गालामा अब फूलैफूल रोपेर हराभरा बनाउने बताए । नगरप्रमुख हरिबहादुर महत, उपप्रमुख मिना कुमारी लामा, हेटौंडा १ का वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने लगायतकाले फुल त रोपे तर कसले हेक्का राखेन न कि त्यो ठाउँ २५ मिटर सडक सिमाभित्र पर्छ भनेर । असार २४, २०७६
प्रदेशको राजधानी 'हेटौंडा'को ट्राफिक व्यवस्था भद्रगोल, वास्तै छैन प्रहरीलाई प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा पार्किङ अव्यवस्थित हुदा यहाँका मुख्य सडक अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन् । हेटौंडाका मुख्य सडक स्कुल रोड, पारिजातपथ, कान्तिराजपथ, राप्तिरोड, अजरअमर रोड लगाएतका सडक निकै अस्तव्यस्त हुने गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरले मुख्य सडकमा नो पार्किङ क्षेत्र तोकेपनि त्यसको कार्यनयन नहुदा समस्या देखिएको छ । असार २३, २०७६
२५ मिटर सडक बिस्तार : लोथर र अमलेखगन्जबाट चल्यो डोजर २५ मिटर सडक बिस्तार कार्य आजबाट सुरु भएको छ । राजमार्गको दाँया-बाँया २५-२५ मिटर सडक सिमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन आदेश सहितको सूचना निकालेको मिति सकिएपछी सोमबारबाट सडक बिस्तार अभियान सुरु भएको छ । मकवानपुरको लोथर र बारा असार २३, २०७६
हेटौँडा आउदै गरेको सुमो भिमफेदीमा दुर्घटना, घाइतेलाई अस्पताल ल्याइदै काठमाडौंबाट हेटौँडा आउदै गरेको टाटासुमो दुर्घटना भएको छ । मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर १ सुन्दरीमाईमा ना.१ ज ७५३५ नम्बरको सुमो दुर्घटना भएको हो । अनियन्त्रित भएर सुमो दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । दुर्घटनामा ५ जना घाइते भएको र घाइतेलाई हेटौंडा अस्पताल ल्याउदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सुमोमा ९ जना यात्रु सवार थिए । असार २३, २०७६
सडक डिभिजन हेटौंडाको माइकिङ : २५ मिटर सडक बिस्तार भोलिदेखि सुरुहुन्छ २५ मिटर सडक बिस्तार कार्य भोलि सोमबारबाट सुरुहुने भएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । राजमार्गको दाँया-बाँया २५-२५ मिटर सडक सिमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन आदेश सहितको सूचना निकालेको मिति सकिएपछी भोलिदेखि घरटहरा हटाउन सुरुगर्ने सडक कार्यालय हेटौंडाका सुचना अधिकारि जयराम अधिकारीले बताए । असार २२, २०७६
हेटौंडामा करेण्ट लागेर एक जनाको मृत्यु मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ मा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा चितवन कालिका नगरपालिका जुटपानी बस्ने २६ वर्षीय पञ्च कुमाल रहेका छन् । असार २२, २०७६
हेटौंडामा भएको खुल्ला फुटसलको उपाधि विजय युथको पोल्टामा हेटौंडा जेसिजको आयोजनामा जारी खुल्ला फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि विजय यूथ क्लवको पोल्टोमा परेको छ असार २१, २०७६